सरकार गरीब , दलित समुदायका बालिकाहरू बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको हो ? - Jhapa Times
सरकार गरीब , दलित समुदायका बालिकाहरू बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको हो ?
Post date १५ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:११
No Comments on सरकार गरीब , दलित समुदायका बालिकाहरू बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको हो ?
गएकाे साउन / भदौको बिचमा १२९ बालिका को बलात्कार पछि हत्या ! सरकार किन यस्तो ?
के साच्चै कानुन फितलो भएर हो ? या गरीब , दलित समुदायका बालिकाहरू बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको हो ? सुरक्षा दिने प्रहरीहरू नै किन बालिका बलात्कारमा संलग्न हुन्छन् ? निर्मला त्यत्तिकै हराइन् तिनीले न्याय नपाउनु भनेको सरकार छैन भन्नु हैन र ? के यहि हो सर्वहारा बर्गको नेतृत्व गर्ने सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारको काम ? कमैया परिवारका २ बालिका मध्ये न्याय नपाउने र उल्टै सजायको धम्किमा ति बालिका आत्महत्या गर्न पुगिन् !
सरकार किन यस्तो ? रोगसंग त बिश्व लडिरहेको छ हाम्रो क्षमताले एत्तिनै भ्यायो होला तर यौन पिपासुबाट किन जोगाउन सकेन हामीलाई सरकारले ? कि सरकारमा पुरूषको बहुमत भएर पो हो कि ?
मंलवार बिहानै सुनियो गौरादहको बजार नजिक ६४-६५ बर्षको आमाको हत्या गरिएको छ ! कसरी बाच्ने हामीले ? सरकार अब अरूलाई दोष देखाएर सुनपानी छर्केर शुद्ध हुने समय हैन ! यो सरकार बहुमतको सरकार चाहेकोकाम गर्न सक्ने सरकार हो । ९ महिने कार्यकालमा एउटा प्रधानमन्त्री ले गर्न सकेका काम सोच्नुहोस् त ? त्यहि बेचेर कहिलेसम्म हामी जनताकाे सामु पुग्ने ?
कहिले एसिड तिनै नारीमाथि खन्याउने , कहिले बलात्कार गरेर गर्भधारण गराउने र तिनीलाई वेवारिसे बाउको बच्चा जन्माउन बाध्य पार्ने र आफन्त , छरछिमेकि सबैले अपमान गर्ने , कहिले बलात्कारको पोल खुल्छ भनेर हत्या गर्ने ! सरकार यसमा को दोषि ? तपाई सत्तामा हुनुहुन्छ होला तँपाइको डरले र तपाइको सम्पत्तिले तपाईका बालबालीका चिल्लो कारमा सुरक्षित होलान् र गम्भीर रुपमा नलिएको होला ! तर ति कमैया , ति दलित , यि महिलाहरुको पनि त तँपाइ सरकार त होलानि ! कि हैन ?
किन सकिदैन दर्बिलो कानुन ल्याएर अपराधिलाई सजाय दिन ? किन लुकाइन्छ छिमेकिका छोरी ,बुहारी , आमालाई बलात्कार गरेर हत्या गरिएका काण्ड छिमेकिबाटै ?
अब अति भयो , सुनिता नमिता काण्ड पंचायत कालमा भयो त्यो ठूलो इस्सु बनाइयो ब्यवस्था परिवर्तनको लागि । त्यस्तै निर्मला र कमैयाका छोरीको इस्सुले सरकार तिम्रो पनि अन्त्य हुन नसक्लार ?
त्यसैले तिमी माथि भरोसा राखेर पुर्खौ देखिका आस्था बन्दकी राखेर तिमीलाई मत दिएर सरकारमा बस्न पाएका छौ ! होसियार भएर राम्रा काम गरेनौ र आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्न सकेनौ भने कुर्सी छोडेको दिन तिमी एक्लै हुनेछौ र हाम्रै सपना पनि चकनाचुर बनाउने छौ ! अनि तिम्रो कुर्सिको लडाइपनि सकिने छ । होसियार बन!
अदालतमा सिण्डिकेट राख्ने बिचौलीयाहरूलाई पहिला सजाय गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र सरकारको सुरक्षा प्रणाली नभत्कियोस् ! यो कुर्सीको लडाइ गर्ने समय हैन , रोग भोक र न्यायको निम्ति छट्पटाएका जनतालाई संरक्षण गरि न्याय दिने समय हो ! चेतना भया !
लेखक झापा जिल्लाकाे अगुवा महिला साथै शिक्षिका हुनुहुन्छ ।
Tags अधिकार, झापा, दलित, महिला
← डा. गाेविन्द केसीकाे अनशन : अनशनले चिकित्सा क्षेत्रमा केके सुधारभए , १७ दिनदेखि केसी के कालागी अनसनमा हुनुहुन्छ ? → पुर्व अर्थमन्त्रि खतिवडा अमेरिकाकाे राजदुत सिफारिस